Ciidamada Liyuu Booliska Oo Qabiil U Kala Jabay & Waddooyinka Soo Gala Jigjiga Oo Caawa La Xidhay - Jigjiga Online
HomeSomalidaCiidamada Liyuu Booliska Oo Qabiil U Kala Jabay & Waddooyinka Soo Gala Jigjiga Oo Caawa La Xidhay
Ciidamada Liyuu Booliska Oo Qabiil U Kala Jabay & Waddooyinka Soo Gala Jigjiga Oo Caawa La Xidhay
Jigjiga (JO) – Ciidamada Liyuu Booliska ee deegaanka Soomaalida ayaa heegan la geliyey, waxaana caawa la xidhay afarta waddo ee soo gala magaalada Jigjiga, kuwaas oo lagu daad-gureeyey ciidamo badan.
Afarta keelaa ee ku yaalla duleedka magaalada Jigjiga ee Xoodhlay, Magaalo Qaran, Lafo-ciise iyo Karamardha ayaa la dhoobay ciidamo badan oo joojinaya dhamaan baabuurta ku socota magaalada, lamana ogola in wax gaadiid ah u gudbaan dhinaca magaalada.
Ciidamo tiro badan oo aad u hubaysan oo ku sugan afartan keelaa, gaar ahaan Xoodhlay oo ah waddada Jigjiga kasoo gasha dhinaca Koonfur ee xidhiidhiisa gobollada dalka iyo caasimadda deegaanka, ayaa waxa kale oo ay joojinayaan dadka lugaynaya oo aan loo ogolayn inay dhaqdhaqaaq sameeyaan.
Arrintan ayaa timid markii uu khilaaf iyo kala-shaki ka dhex dhashay gudaha ciidamada Liyuu Booliska, kaas oo ka abuurmay qiimayn ka socotay Magaalada Dhagax-buur oo Madaxa Xarunta Dhexe ee Xisbiga PP ee Deegaanka Soomaalida, Eng. Maxamed Shaale, Hoggaanka Nabadgelyada, Dr. Xuseen Xaashi iyo xubno kale qaab qabiilaysan ugu samaynayeen ciidamada.
Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar oo isaguna qayb ka noqday qiimayntan ayaa darajooyin ku taxay askar gaar loo soo xulay oo reer kaliya u badnaa, taas oo keentay in illaa 50 sarkaal oo ay wehelinayeen ilaaladoodu ay ka gellinkii dambe ee Khamiistii ka baxaan Dhagax-buur.
Sida ay JigjigaOnline u xaqiijiyeen ilo-wareedyo xogogaal ah, saraakiishan gadoodsan oo ah kuwii ugu sarreeyey ee kasoo jeeda gobollada Wardheer, Qorraxay, Nogob, Erer iyo Faafan ayaa waxay dareensan yihiin in xukuumaddu ay reer kaliya oo ah jifada Madaxweyne Mustafe si gaar ah loo dallacsiinayo, isla markaana ay soo baxeen munaafaqad ciidanka dhexdooda ah oo lagu basaasayo saraakiisha aanay isku reerka ahayn Madaxweynaha.
Taliyaha ciidanka Liyuu Booliska oo ay qaraabo dhow yihiin Madaxweynaha, iyo Eng. Maxamed Shaalle oo ku sugnaa Dhagax-buur maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxay diyaariyeen saraakiil kasoo jeedda jifada Madaxweynaha oo lagu dhex daray dhawr qof oo kale oo raad-gadasho ah, kuwaas oo maanta lagu taxay darajooyin, isla markaana uu Madaxweynuhu khudbad u jeediyey.
Lama garanayo ujeeddada ay xukuumadda ka damacsan tahay kala jabinta ciidanka Liyuu Booliska, hase yeeshee, wixii kasoo kordha, dib ayaanu idiinka soo gudbin doonaa.
Itoobiya oo Saldhig Weyn AMISOM Ka Siisay Magaalada Jigjiga